Siyaasi Soomaaliya madaxweyne ka ahaa 5 maalmood oo maanta geeriyoodey – SBC
Siyaasi Soomaaliya madaxweyne ka ahaa 5 maalmood oo maanta geeriyoodey
Allaha u naxriistee waxaa magaalada Nairobi ee dalka kenya ku geeriyoodey Marxuum Sheekh Mukhtaar Maxamed Xuseen oo Soomaaliya mudo shan maalmood ah ka ahaa madaxweyne KMG ah, xiligaasi oo aheyd sanadkii 1969-kii markii la dilay madaxweyne C/rashiid Cali Sharma’arke.
Sheekh Mukhtaar ayaa saaka 7:30-kii subaxninmo ku geeeriyooday gurigii uu deganaa oo ku yaal magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya halkaasi oo mudooyinkii ugu dambeeyey uu ku xanuunsanaa.
Sheekh Mukhtaar Allaha U Naxriistee wuxuu xiligaasi ahaa Gudoomiyihii Baarlamaanka Soomaaliya waxaana sida uu qabey dastuurkii Soomaaliya ee xiligaasi markii uu dhintey madaxweynaha uu noqdey Madaxweyne KMG ah inta laga soo dooranayo madaxweyne cusub, laakiin shan maalmood ka dib geeridii Madaxweyne Sharma’arke waxaa talada wadanka afgambi kula wareegay koox saraakiil oo uu horkacayey Jeneral Maxamed Siyaad Barre oo ahaa taliyihii ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya.
Warbaahinta SBC insha ALAAH waxay idiin soo gudbin doontaa taariikh nololeedkii Marxuumka oo haatan diyaarin ay ku socoto.
Bahda Warbaahinta SBC waxay Tacsi tiiraanyo leh u Dirayaan dhamaan Umada Soomaaliyeed gaar ahaan Ehelada uu ka geeriyooday Marxuum Sheekh Mukhtaar Maxamed Xuseen, waxaanu leenahay Janadii Fardowso alaha ka Waraabiyo dadkii uu ka tagayna Samir iyo iimaan Allaha ka siiyo AMIIN AMIIN AMIIN.
salman freedom says:
allah ha u naxariisto janada alla haka waraabiyo